हुचिल हेर्न यस्तो पर्खाइ !- फिचर - कान्तिपुर समाचार
हुचिल हेर्न यस्तो पर्खाइ !
दिउँसो माउ देखिँदैन । बच्चा बेलाबेला गुँडबाहिर आएर नियाल्छ । त्यही मौकामा फोटोग्राफरले २/४ क्लिक हानिहाल्छन् ।
वैशाख २८, २०७७ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — सुकेको पुरानो रुख नजिक केही दिनयता फोटोग्राफरहरु निरन्तर झुम्मिन थालेका छन् । लगभग बीचबाट भाँच्चिएको रुखले मात्रै उनीहरुलाई तानेको होइन । रुखमा बेलाबेला सानो बचेरो देखिन्छ, दुइटा आँखा चम्काउँदै । त्यसैलाई क्यामेरामा कैद गर्न उनीहरु बढी नै धैर्य गरेर रुखअगाडि उभिन्छन् ।
दुर्लभ पक्षी मलाहा हुचिल (ब्राउन फिस आउल) को बच्चा रुखमा छ भन्ने सुनेका चराप्रेमीहरु क्यामेरा बोकेर त्यहाँ पुगिहाल्छन् । ‘अहिले लकडाउन नभएको भए सौराहा आउने चराप्रेमी पर्यटकहरु यही अड्डा जमाएर बस्थे । उस्तै परे उनीहरुलाई लन्च प्याक पनि यही ल्याइदिनुपर्थ्यो,' सौराहामा पथप्रदर्शक (टुरिस्ट गाइड) बासु बिडारीले भने । बिडारी चराविद् पनि हुन् ।
राप्ती नदीको किनार बद्रहनी गाउँ छिर्ने गेटको आडैमा बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको सिमानाभित्र यो रुख रहेको छ ।
'आधा माथिको रुख भाँच्चिएको वर्षौं भयो । यो रुखको हामीलाई के वास्ता ? तर साता दिनयता दिनहुँ कोही न कोही आएर यसैको अगाडि बस्छन्,' रुखका आडैमा घर भएका बद्रहनीका सुवास तमाङले भने, 'फोटो पनि खिच्न थालेपछि त्यहाँ चराको बच्चा रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’ रातमा एउटा अनौठो आवाज आउने गरेको उनीहरुले ख्याल गरेका थिए । त्यो आवाज त्यही बच्चाको माउको रहेछ ।
दिउँसो रुखमा माउ देखिँदैन । बच्चा बेलाबेला गुँडबाहिर आएर नियाल्छ । त्यही मौकामा फोटोग्राफरले दुई चार क्लिप लिइहाल्छन् । ‘यसको आमा राति नै फर्कन्छे । दिनभर आहारा खोज्दै खोला वा जंगल पस्छे । यसले खाने भनेको प्रायजसो मुसाहरु नै हो । माछा, गंगटा पनि टिप्छे,’ बिडारीले भने ।
लाटोकोसेरो संरक्षणमा सक्रिय राजु आचार्यका अनुसार खासमा यी सबै लाटोकोसेरो अर्थात् उल्लु नै हुन् । ‘सानोलाई लाटोकोसेरो भन्छौं । ठूलोलाई हुचिल,' उनले भने । नेपालमा यस्ता ठूला उल्लु अर्थात् हुचिल ७ प्रजातिका पाइन्छन् । पहिला २३ प्रजातिका उल्लु पाइने गरेकोमा २ प्रजाति अहिले देखिनै छाडेको उनले बताए । त्यसैले सानो वा ठूलो कुनै पनि प्रजातिको उल्लुको गुँड र बच्चा देख्दा चराप्रेमी निकै हर्षित हुने गरेका छन् ।
मलाहा हुचिल नेपालमा ठिकठिकै मात्रामा पाइने आचार्य बताउँछन् । ‘तराईदेखि समुद्र सतहबाट १५ सय मिटर उचाइको पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । हुम्लामा समेत भेटिएको छ,' उनले भने, 'राम्रो अनुसन्धान भएको छैन तर नेपालभर एक हजारदेखि ३ हजारसम्म छन् भन्ने अनुमान छ ।’ उनका अनुसार मलाहा हुचिलले खोला आडमा सुक्खा र सुरक्षित ठाउँमा गुँड लगाउँछ ।
खोलामा माछा कम हुँदै गएका छन् । जंगलमा सुक्खा रुख हराउँदै गएका छन् । त्यसैले मलाहा हुचिललाई समस्या बढेको आचार्यले बताए । ‘सानाठूला सबै उल्लुले ४ महिनामा ३ हजारसम्म मुसा खाने गर्छन् । मुसा मारेर यिनीहरुले मान्छेका लागि ठूलो मद्दत गरेका छन् । तर उल्लुका लागि चाहिने बासस्थान र खोलानाला हाम्रा कारणले विनाश हुँदै छ,’ उनले भने ।
वनमा ठूला रुख खोजीखोजी काट्ने चलन छ । सामुदायिक वनहरुले सुखेका रुख हटाउने नीति लिने गरेका छन् । तर मलाहा हुचिलले यस्तै रुखमा गुँड बनाउने गर्छ । बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष जितु तामाङले भने आफूहरुले सामुदायिक वनबाट ढलेका र सुकेका पुराना रुख पनि नहटाउने नीति लिएको बताउँछन् । ‘सबैखाले रुखको आ–आफ्नो महत्व छ । हाम्रो वनभित्र जानुभयो भने ढलेका पुराना रुख पनि त्यस्सै छाडेको प्रशस्तै देख्नुहुनेछ । कुनै काम नआउला भनेको यो पुरानो मक्किएको सिमलको धोद्रो रुखमा त यति महत्वपूर्ण चरोले गुँड लगाएर बच्चा हुर्काउँदै छ,' उनले भने, 'यसैले देखाउँछ, सबैखाले रुख महत्वपूर्ण छन् ।’
यो मध्यवर्ती वन चरा र वन्यजन्तु अवलोकनका लागि प्रख्यात छ ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १४:३६
एसईई हुन्छ, तयारीमै रहनुस् : शिक्षा मन्त्रालय
वैशाख २८, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लकडाउन खुलेपछि लिइने जनाएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार लिखित रूपमा लिइने परीक्षाबाट मात्र एसईईले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेसमेत अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार चैत ६ गतेबाट हुने एसईई परीक्षा अघिल्लो साँझ स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता जनप्रतिनिधि र विज्ञले एसईईलाई फरक मोडबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उक्त भनाइले विद्यार्थीलाई अन्योल सिर्जना गरेपछि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो ।
‘एसईई परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गर्ने भन्ने विषयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्योलमा पारेको बुझिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘विद्यमान शिक्षा ऐन कानुनअनुसार लिखित परीक्षाबाट मात्र एसईईले मान्यता पाउनेछ । आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसईईलाई मान्यता दिने हो भने त्यसअघि ऐन संशोधन भएमात्र सम्भव छ । हामी (मन्त्रालय) त्यो बिन्दुमा पुगेका छैनौं ।’ शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आइतबार आयोजना गरेको वेबिनारमा उनले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले लकडाउन खुलेको दुई हप्तापछि एसईई र अरु परीक्षा लिइने बताए । ‘विद्यमान कानुनअनुसार एसईई परीक्षाको तयारी जहाँ पुगेर रोकिएको त्यहीँबाट अघि बढ्छ,’ कोरोनाको महामारीमा जीवनलाई जोखिममा राखेर परीक्षालाई महत्व नदिइने उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘स्थिति सहज भएर लकडाउन खुलेको दुई हप्ताको म्याद राखेर परीक्षार्थीलाई सूचना दिनेछौं । तयारीमै रहनुस् ।’ अध्यक्ष पौडेलले १ सय ४४ देशको परीक्षा बोर्डको स्थिति बुझेको र त्यसमा ७३ वटा बोर्डले परीक्षा स्थगित गरेको जनाए ।
बोर्डको रेकर्डअनुसार यो वर्ष ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जनाले एसईई दिने तयारीमा छन् । देशभरिमा १ हजार ९ सय ९७ परीक्षा केन्द्र विस्तार गरिएका छन् । प्रश्नपत्र सबै केन्द्र नजिकको प्रहरी चौकीमा सुरक्षित गरी राखिएका छन् । परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले कुनै पनि परीक्षार्थीलाई डेरा बस्नु नपर्ने गरी ७ सय २७ केन्द्र थप्ने योजना बनेको बताए ।
‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रका परीक्षार्थीलाई समस्या देखिएको छ,’ नियन्त्रकले भने, ‘न्यून विद्यार्थी संख्या भए पनि टाढा डेरा लिएर बस्नु नपर्ने गरी केन्द्र र उपकेन्द्र विस्तार गर्ने योजना बनेको छ ।’ सातै प्रदेशमा फरक–फरक प्रश्नपत्र रहेकाले फरक दिनमा परीक्षा लिँदा कुनै बाधा नपर्ने जनाइएको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गरिनेसमेत नियन्त्रक खकुरेलले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १४:२६